Utachiona Kudzora Fekitori | China Infection Control Vagadziri uye Vatengesi
DXQ yakateedzana multifunction rack washer-disinfector yakanyatsogadzirirwa zvinhu zvekugezesa muchipatara senge mubhedha wemurwere, ngoro uye rack, mudziyo nezvimwe zvine zvazvakanakira kugona kukuru, kuchenesa zvakakwana uye kuita kwakawanda-degree. Inogona kupedzisa maitiro ese kusanganisira kuwacha, kusuka, kuuraya mishonga, kuomesa nezvimwe.
DXQ yakateedzana multifunction rack washer-disinfector inogona kushandiswa mune zvekurapa uye zvehutano munda kana mhuka murabhoritari kugeza nekuuraya mishonga zvinhu zvakakodzera kusanganisira ese marudzi etrolley, yepurasitiki tswanda, sterilizing mudziyo nechivharo chayo, oparesheni tafura nekuvhiya shangu, mhuka murabhoritari matanga, etc.
Yemahara Kumira Ultrasonic Kuchenesa
QX yakateedzana ultrasonic washer yakakosha muchina wekuwachisa mu CSSD, nzvimbo yekushandisa uye rabhoritari.SHINVA inopa yakasanganiswa ultrasonic washer mhinduro, kusanganisira yekutanga kugeza, yechipiri kuwacha uye yakadzika kuwacha neakasiyana maficha.
Tafura yepamusoro Ultrasonic Washers
Iyo mini ultrasonic washer inoshandisa yakakwira frequency oscillation chiratidzo, iyo inotumirwa neiyo ultrasonic jenareta, inoshandura kune yakakwira frequency mechina oscillation chiratidzo uye inopararira mukati meiyo ultrasonic yepakati-yekuchenesa mhinduro. Iyo ultrasonic inopararira kumberi mune yekuchenesa mhinduro kuti ibudise mamirioni madiki matema. Iwo mabhuru anogadzirwa mune isina kusimba yekumanikidza nzvimbo yeiyo ultrasonic yakatwasuka kutapurirana ichikurumidza kupinza mune yakanaka kumanikidza nzvimbo. Maitiro aya anonzi 'Cavitation'. Munguva yebubble implosion, pakarepo kumanikidza kwakanyanya kunogadzirwa uye kunokanganisa zvinyorwa kuti zvibvise kusvibiswa kunonamatirwa pamusoro nepakati pezvinyorwa kuti zviwane kuchenesa chinangwa.
Chigadzirwa Zvimiro zveCentre-HGZ
■ 5.7-inch color kubata kudzora skrini.
Ch Chamber inokosha inoumba, iri nyore kuchena isina mabhakitiriya masara.
■ Yakapfava girazi musuwo, zviri nyore kutarisa mukamuri yemukati mamiriro.
■ Smart password yemagetsi inokiya, yakachengeteka uye yakavimbika.
■ Rotary yakaturikwa nzira yekuchengetera maendoscopes.
■ mana akaturikidzana chinomisa anchor system, kutenderera kwakatenderedza endoscopes.
■ LED inotonhora mwenje mwenje, yakachengeteka uye yakavimbika, hapana kupisa kunogadzira.
Iyo yekuomesa uye chaiyo yekuchengetedza iyo endoscope yakakosha. chikamu cheiyo endoscope yekuwacha uye disinfection maitiro, ayo anoenderana zvakananga ne endoscope uye murwere kuchengetedzeka.